ညဘက်တော်တော်နဲ့ မအိပ်တတ်တဲ့သူတွေ အိပ်ချိန်အတိအကျ ဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်မလဲ
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားအင်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ညဘက်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက် အနားယူသင့်ပါတယ်။ ညဘက်မှာ အိပ်ရေးဝမှာ မနက်ခင်းကို လန်းလန်းဆန်းနဲ့ နိုးထလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်သွားနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ညဘက်မှာ ဇီးကွက်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးကို ရှာဖွေပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါပြီနော်။
အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာအတွေးများကို အပြတ်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုစိတ်နဲ့ အိပ်ရာဝင်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ညဘက်အိပ်ရာဝင်ခါနီး တိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေလျော့ဖို့အတွက် တရားထိုင်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) အိပ်ချိန် သတ်မှတ်ပါ
လုပ်စရာ ကိစ္စဝိစ္စတွေ ပြီးတဲ့အချိန်ကို သင့်ရဲ့ အိပ်ချိန်အဖြစ် အတိအကျ သတ်မှတ်ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အိပ်ချိန် မရောက်ခင်မှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို အပြီးလုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး အလေ့အကျင့် လုပ်ထားပါ။
(၃) ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့အသုံးမပြုပါနဲ့
ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့၊ တီဗီ ကို ညနက်ထိ ကြည့်တာ၊ အသုံးပြုတာမျိုး မပြုလုပ်ပါနဲ့။ အိပ်ရာဝင်ခါးနီး ၁၅ မိနစ်လောက်အလိုမှာ ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့နဲ့ တီဗီကို အားလုံး ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ လက်ပ်တော့ရဲ့ အလင်းရောင်က မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို၊ သင့်စိတ်ကို နိုးကြားစေတဲ့အတွက် ညဘက် တော်တော်နဲ့ အိပ်ပျော်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း သတိပြုရမယ့် အချက်ပါပဲ။
ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက် အားအင်ဖြစ်စေမယ့် အကောင်းဆုံးသောအရာကတော့ နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်ပါပဲ။ နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်က အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အပြင် ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ချိန်မရောက်ခင်မှာ နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်ထားလိုက်ပါ။
အိမ်ခန်းအပြင်၊ အတွင်းဘက် လျှပ်စစ်မီးများအားလုံးကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီအလင်းရောင်တွေက သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ မီးမှောင်နေရင် မအိပ်တတ်တဲ့သူတွေကတော့ မီးမှိန်မှိန်လေးသာ ထားသင့်ပါတယ်။ မီးမှိန်မှိန်လေးက သင့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-eGUTFBJHnd0/XEBG5vPuz9I/AAAAAAAB75Q/044w6VwW1wskJYtO9UFb7V1V9IQGvgouwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/woman-doing-ab-workout-at-home.jpg" alt="မိန်းမကိုယ်ကျပ်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း !">
မိန်းမကိုယ်ကျပ်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း !
Phothutaw လွန်ခဲ့သော 8 နာရီခန့်က
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-evJsNSempXM/XEBK6NrV5LI/AAAAAAABmk4/r1zl_CtYeEgLH2QUxD1uyOOVdm2hUFrXgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/18.png" alt="ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်">
ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-TNBKi-zNv_0/XEA_0kSG7-I/AAAAAAABmh4/WvECzJJsbL0LXuIlDe2tZeBARtrcqzDpwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/17.png" alt="ရင်သားမှာ အလုံးအကျိတ်တစ်ခု စမ်းမိတဲ့အခါ ...">
ရင်သားမှာ အလုံးအကျိတ်တစ်ခု စမ်းမိတဲ့အခါ ...